डा. निहारिका पौड्याल, Author at लेख नेपाल
मान्छेले खाने तरकारी यतिसम्म महँगो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो तरकारी छ, जसको मूल्य एक किलोकै झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ पर्दछ । सोही कारण यो तरकारी विश्वकै सबैभन्दा महँगो तरकारी बनेको छ । यो तरकारीको नाम ‘हप शुट्स’ हो । उक्त तरकारीको बोटमा लाग्ने फूललाई ‘हप […]
आजकल तामाको भाँडोको प्रयोग कम हुन थालेको छ । तामालाई हिन्दु परम्परा अनुसार पवित्र धातु मानिन्छ । र यसलाई वैदिक कार्यहरुमा अनिवार्य मानिन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ‘ताम्रजल’ भनिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी खानाले तीनैवटा दोष (वात, कफ र पित्त) लाई सन्तुलित पार्ने क्षमता हुन्छ । यसका लागि तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ […]
दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रातो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आइरन, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा २२ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । रहरको दाल बाथ, पित्त र कफ अर्थात् त्रिदोषनाशक हुने भएकोले सबैका लागि अनुकूल मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार रहर रुखो, शीतल, […]
धार्मिक रुपमा होस वा प्राकृतिक रुपमा होस तुलसीको अत्यन्त महत्व रहेको छ । यसको सेवन वा प्रयोग गर्नाले धेरै कुरा फाइदा लिन सकिन्छ । यसको प्रयोगले नै वा सेवन गर्दा धरै किसिमका रोगहरु घरमै पनि निको पार्न सकिन्छ । यो अत्यन्तै बहुगुणी बृक्ष हो । तर यसको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । गलत तरिकाले तुलसीको प्रयोग […]
August 21, 2020 August 21, 2020 डा. निहारिका पौड्याल
इस्कूस खेती कसरी गर्ने ? के छन् त इस्कूसका फाइदाहरू ?
इस्कूस हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण तरकारी हो। यसको अङ्ग्रेजी नाम Chayote र वैज्ञानिक नाम Sechium Edule हो। इस्कूसलाई सागसब्जिको Cucurbits परिवार अन्तर्गत राखिएको छ। इस्कूसको उत्पत्ति र विकास मेक्सिको र ग्वाटेमालाबाट भएको मानिन्छ। इस्कूसमा कार्बोहाइड्रेट्स 4.51%, सुगर 1.66%, फ्याट 0.13% साथै भिटामिन B, C, E र K प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। इस्कूसबाट पाइन सकिने भिटामिन र खनिज पदार्थको […]
August 3, 2020 August 4, 2020 डा. निहारिका पौड्याल
घिउकुमारीका फाइदाहरु के–के हुन्छन् र यसको महत्व के ?
अनुहारको चाया पोतो डन्डिफोहोर जतीपनि अनुहार बिगार्ने समस्या छन यसमा गाइको घिउ, मह मिसाएर लगायो भने निको हुनुको साथै अनुहार सफा र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ ।
Tagged health	पूरा पढ्नुहोस्
बिरेनुनका महाफाइदाहरू : धेरैवटा रोगको अचुक औषधी
बिरेनुन सर्वप्रथम त पाचन क्षमता बढाउन को लागी प्रयोग गरिन्छ ।‌ पेटको माथिल्लो भागमा ग्याँस बढेर अमिलो पानी निस्किने, अपच हुने, पेट ढाडिरहने, ग्याँसको कारणले गनाउने डकार आउने, ग्यास्ट्रिक भएर दिसा नलाग्ने, पेटमा ग्याँस धेरै भएर भमिट हुने, डाइरिया हुने, जती पनि पाचन सम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरुको लागी बिरेनुन अति नै फाइदाजनक हो ।
June 26, 2019 August 4, 2020 डा. निहारिका पौड्याल
जानिराखौं ग्याष्ट्रिक निको पार्ने घरेलु औषधी
अमला, ज्वानो, दालचिनि, जिरा, आलस, मेथि, धनिया लाई धुलो बनाएर बिहान बेलुका खाली पेटमा १ गिलास मनतातो पानीमा १ चिम्टी धुलो राखी आधा घण्टा लगाई पिउने
June 26, 2019 August 6, 2020 डा. निहारिका पौड्याल
बारम्बार एकै किसिमको सोचाई आउँछ, ओसिडी (Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)) पो भएको छ कि ?
आत्महत्या OCD भित्र पर्दैन तर आत्महत्याको बिचार कहिलेकाहिँ आउन सक्छ वा कहिलेकाहिँ मर्दिउ कि जस्तो सबैलाइ आउन सक्छ ।
Tagged health, Tips	पूरा पढ्नुहोस्